Joojinta porno, ka caawinta ka soo kabashada iyo ka hortagga | Abaalmarinta Abaalmarinta
Mary Sharpe, Gudoomiyaha
Qorshooyinka Qormada Dugsiga
Bogga ugu weyn Goynta Porn
Kumanaan kun oo wiilasha adduunka oo idil ah ayaa ka faa'iideystey joojinta galmada. Sida dhammaan dabeecadaha xakamaynta, ceebta ah inaanu xakameyn karin dhaqankeena ayaa ah inta badan qaybta ugu adag. Laakiin fadlan ogow, ma jabin. Waad beddeli kartaa.
Hay'adda Abaal-marinta (Reward Foundation) waxay siisaa calaamadaha calaamadaha kaa caawinaya inaad joojiso.
Joojinta porno waa safar kala duwan oo qof walba ah. Maskax kastaa way ka duwan tahay, markaa hawsha joojinta waa mid shaqsiyeed. Qaarkood way ku adag tahay, halka kuwa kale ay si fudud u go'aansan karaan inay joojiyaan ugu yaraan dhib.
Waxaa jira saddex tallaabo oo muhiim ah…
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad garatid haddii ay jiraan dhibaatooyin jira ama hadda jira.
Marka labaad, waxaad u baahan tahay inaad hesho hab lagu joojiyo. Taas macnaheedu waa ka takhalusida dhamaan lebenkaaga iyo inaad jebiso xiriiriyeyaasha bixiya.
Saddexaad, waxay kaa caawinaysaa helitaanka nashaadyo kale oo lagu xoojiyo maskaxdaada, jidhkaaga iyo nolosha bulshada si aad u beddesho waqtiga iyo dadaalka lagu bixiyay bilka.
Qeybtan Hay'adda Abaal-marinta waxay soo bandhigaysaa qalab iyo habab kuu sahlaya adiga, ama qof aad daryeesho, si aad u hesho xoogga iyo go to aanka looga baxsado xakameynta galmada internetka ee khasabka ah. Waxaan daboolnaa safarka buuriga ah ee joojin joojinta bilawga ilaa dhammaadka. Nasiib wacan dhisida mustaqbal rajo la'aan ah iyo abuuritaanka nolol jacayl qancisa oo lala yeesho wehelka dhabta ah.
Caawimaadda mukhadaraadka sigaarka internetka
Tagida porno bilaash ah
Mashruuca Reward Foundation ee habka dib u soo kabashada saddexda tallaabo.
Barnaamijka Ka Hortagga Aasaasiga ah ee barnaamijka abaalmarinta
Hay'adda Abaalmarinta Reward ma bixiso daaweyn.